China Glass အဖျော်ယမကာပုလင်းစက်ရုံ၊ Glass အဖျော်ယမကာပုလင်းရောင်းချရေး
110 ml 3.5 အောင်စ 255ml 8.5oz 350ml 11.5oz Glass Flask Liquor Wine juice ကော်ဖီ ဖန်ပုလင်း အဖျော်ယမကာ
♥ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံ-အချိုရည် အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး သိမ်းဆည်းရန် အထူးကောင်းမွန်သော အဖုံးပါသော အလွတ်ပြန်အဖျော်ပုလင်းများ။ နို့၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ဘီယာ၊ နံနက်စာ shake၊ ကော့တေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်၊ ချက်၊ ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ သုပ်ဝတ်၊ kefir၊ Kombucha၊ ချဉ်စပ်၊ အချိုရည်များနှင့် အခြားအရာများသည် သင့်ဧည့်သည်ကို အံ့အားသင့်စေရန်၊ ပေါင်းပင်ပေးခြင်း ၊ ပါတီအကြိုက်များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် smoothie cups ပုလင်းများအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
♥လေလုံသော အဖုံးများဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သိမ်းဆည်းခြင်းစတိုင်ကျတဲ့ ပုလင်းဗူးတွေ ၊ မင်းရဲ့ အသုပ်အတွက် အကောင်းဆုံး သိုလှောင်မှု ပုလင်းတွေ ၊ အပြင်မှာ BBQ ၊ မင်းကိုယ်ပိုင် လတ်ဆတ်တဲ့ ဖျော်ရည်ဗူး ၊ မင်းရဲ့ sommoth ကို မင်း လိုသမျှ ယူသွား ၊ နို့ ၊ ရေ ၊ အချိုရည် နဲ့ တခြား ဖျော်ရည် တွေ လိုမျိုး မင်း အကြိုက်ဆုံး ဖျော်ရည် တွေ နဲ့ ထပ်ဖြည့် ၊ ယိုထွက်မှာ မပူပါနဲ့ ။ ပျော်ပွဲစားပွဲ၊ ပေါင်းပင်များနှင့် ပါတီပွဲများကျင်းပရန်၊ အချိန်တိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
♥အရှိန်မြှင့် အရည်အသွေး-ပြင်းထန်သော အပူ သို့မဟုတ် အအေး အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမက မြင့်မားသော ဖန်ခွက်များ၊ bpa ကင်းစင်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက် ကင်းစင်ခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း ဘေးကင်းခြင်း ! စတိုင်ကျသော ပုံသဏ္ဍာန် ၊ တာ့တာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၊ အကောင်းဆုံးသော ဖန်ခွက် ဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုကို သေချာစေရန်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံနိုင်စေရန်။
♥Classic Set:၎င်း၏အဝိုင်း သို့မဟုတ် စတုရန်းပုံစံဒီဇိုင်းသည် အလွန်ဂန္ထဝင်လှပါသည်။ နေရာချွေတာခြင်း၊ အချိုရည်များ၊ ဆီများနှင့် ငံပြာရည်များအားလုံးအတွက် သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အခြောက်ခံပစ္စည်းများ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ်အချိုရည်ကို ချက်ရန် အချဉ်ဖောက်ထားသော ဖန်ပုလင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
♥ပန်းကန်ခွက်ယောက် ဘေးကင်းသည်-ပုလင်းစုတ်တံ မလိုအပ်သော်လည်း ဦးထုပ်များကို လက်ဖြင့်ဆေးပါ။ဖန်ခွက်သည် မည်သည့်အခါမျှ စွန်းထင်းခြင်း သို့မဟုတ် အနံ့ဆိုးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အချိုရည်များနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
155ml 295ml 355ml 505ml Empty Frosted Juicy Bottles အဖျော်ယမကာ Glass 16 oz ဖန်ပုလင်းများ
♥ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံ- ဖန်ရည်ပုလင်းများအချိုရည် အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး သိမ်းဆည်းရန် အထူးကောင်းမွန်သော အဖုံးပါသော အလွတ်ပြန်အဖျော်ပုလင်းများ။ နို့၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ဘီယာ၊ နံနက်စာ shake၊ ကော့တေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်၊ ချက်၊ ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ သုပ်ဝတ်၊ kefir၊ Kombucha၊ ချဉ်စပ်၊ အချိုရည်များနှင့် အခြားအရာများသည် သင့်ဧည့်သည်ကို အံ့အားသင့်စေရန်၊ ပေါင်းပင်ပေးခြင်း ၊ ပါတီအကြိုက်များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် smoothie cups ပုလင်းများအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
♥Classic Set:၎င်း၏စတုရန်းပုံစံဒီဇိုင်းသည် အလွန်ဂန္ထဝင်လှပါသည်။ နေရာချွေတာခြင်း၊ အချိုရည်များ၊ ဆီများနှင့် ငံပြာရည်များအားလုံးအတွက် သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ်အချိုရည်ကို ချက်ရန် အချဉ်ဖောက်ထားသော ပုလင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
♥ပန်းကန်ခွက်ယောက် ဘေးကင်းသည်-အရှုပ်အရှင်းကင်း၍ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။အဖုံးများကို ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ရေဖြင့် ဆေးကြောရန် အကြံပြုထားသည်။
တစ်မူထူးခြားသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ပြန်သုံးနိုင်သော ပြန်လည်ဖြည့်နိုင်သော ကျယ်ဝန်းသော ပါးစပ်အရည်များကို ဖျော်ရည်ဖျော်ရန် ဖန်ပုလင်းများ
♥ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံ-ဖျော်ရည်အားလုံးနီးပါး သိုလှောင်နိုင်သော အဖုံးပါသော ဖျော်ရည်အတွက် အလွတ်ပြန်ဖြည့်နိုင်သော ဖန်အိုး! နို့၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ဘီယာ၊ နံနက်စာ လှုပ်ခါ၊ ကော့တေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်များ၊ ဘီယာ၊ ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ အသုပ်ဝတ်ရုံ၊ kefir၊ Kombucha အတွက် သုံးလို့ကောင်း။ အချဉ်ဖောက်ထားသော အချိုရည်များနှင့် အခြားအရာများသည် သင့်ဧည့်သည်ကို အံ့အားသင့်စေရန်၊ ပေါင်းပင်ပေးခြင်း ၊ ပါတီပွဲများတွင် နှစ်သက်ဖွယ်ရာများကို ဖျော်ရည်ခွက်များအဖြစ် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
♥ပန်းကန်ခွက်ယောက် ဘေးကင်းသည်-အရှုပ်အရှင်းကင်း၍ သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူသည်။အဖုံးများကို ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ရေဖြင့် ဆေးကြောရန် အကြံပြုထားသည်။
Eiffel Tower Shape 205ml Glass Wine Whisky Cold Brew Coffee ဖန်ရည်ပုလင်း Glass Beverage Bottles
♥ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံ-အလွတ်ထည့်နိုင်သော ဖန်ရည်ပုလင်းများပါရှိသော အချိုရည်အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး သိမ်းဆည်းရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ နို့၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ဘီယာ၊ နံနက်စာ လှုပ်ခါ၊ ကော့တေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်များ၊ ဘီယာ၊ ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ အသုပ်ဝတ်၊ kefir၊ Kombucha၊ အချဉ်ဖောက်ထားသောအချိုရည်များနှင့် အခြားအရာများသည် သင့်ဧည့်သည်ကို အံ့အားသင့်စေရန်၊ ပေါင်းပင်ပေးခြင်း၊ ပါတီ၏မျက်နှာသာပေးမှုများကို ပြုလုပ်ရန် smoothie cups ပုလင်းများအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
♥Classic Setအဝိုင်း၊ စတုရန်းပုံ၊ ပြားချပ်ချပ်၊ အီဖယ်မျှော်စင်ပုံစံ ဒီဇိုင်းပုံစံသည် အလွန်ဂန္ထဝင်လှသည်။ နေရာချွေတာမှု၊ အချိုရည်များ၊ ဆီများနှင့် ဆော့စ်များအားလုံးအတွက် သိုလှောင်မှု၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ခြောက်သွေ့သောပစ္စည်းများ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ် ချက်ရန် အချဉ်ဖောက်အိုးအဖြစ် အသုံးပြုရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ သောက်!
စိတ်ကြိုက် 60ml 100ml 200ml Frosted Flat Pocket Coffee Juice Milk Cold Brew Glass Beverage Bottles ဖန်ရည်ပုလင်းများ
♥ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံ- ဖန်ရည်ပုလင်းများအချိုရည် အမျိုးအစားအားလုံးနီးပါး သိမ်းဆည်းရန် အထူးကောင်းမွန်သော အဖုံးပါသော အလွတ်ပြန်အဖျော်ပုလင်းများ။ နို့၊ ရေ၊ ဖျော်ရည်၊ ဘီယာ၊ နံနက်စာ shake၊ ကော့တေး၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်၊ ချက်၊ ပျားရည်၊ ကော်ဖီ၊ သုပ်ဝတ်၊ kefir၊ Kombucha၊ ချဉ်စပ်၊ အချိုရည်များနှင့် အခြားအရာများသည် သင့်ဧည့်သည်ကို အံ့အားသင့်စေရန်၊ ပေါင်းပင်ပေးခြင်း ၊ ပါတီအကြိုက်များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် smoothie cups ပုလင်းများအဖြစ် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။♥လေလုံသော အဖုံးများဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သိမ်းဆည်းခြင်းစတိုင်ကျတဲ့ ပုလင်းဗူးတွေ ၊ မင်းရဲ့ အသုပ်အတွက် အကောင်းဆုံး သိုလှောင်မှု ပုလင်းတွေ ၊ အပြင်မှာ BBQ ၊ မင်းကိုယ်ပိုင် လတ်ဆတ်တဲ့ ဖျော်ရည်ဗူး ၊ မင်းရဲ့ sommoth ကို မင်း လိုသမျှ ယူသွား ၊ နို့ ၊ ရေ ၊ အချိုရည် နဲ့ တခြား ဖျော်ရည် တွေ လိုမျိုး မင်း အကြိုက်ဆုံး ဖျော်ရည် တွေ နဲ့ ထပ်ဖြည့် ၊ ယိုထွက်မှာ မပူပါနဲ့ ။ ပျော်ပွဲစားပွဲ၊ ပေါင်းပင်များနှင့် ပါတီပွဲများကျင်းပရန်၊ အချိန်တိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
♥အရှိန်မြှင့် အရည်အသွေး-ပြင်းထန်သော အပူ သို့မဟုတ် အအေး အပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမက မြင့်မားသော ဖန်ခွက်များ၊ bpa ကင်းစင်ခြင်း၊ အဆိပ်အတောက် ကင်းစင်ခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း ဘေးကင်းခြင်း ! စတိုင်ကျသော ပုံသဏ္ဍာန် ၊ တာ့တာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ၊ အကောင်းဆုံးသော ဖန်ခွက် ဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုကို သေချာစေရန်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခံနိုင်စေရန်။♥Classic Set:၎င်း၏အဝိုင်း သို့မဟုတ် စတုရန်းပုံစံဒီဇိုင်းသည် အလွန်ဂန္ထဝင်လှပါသည်။ နေရာချွေတာခြင်း၊ အချိုရည်များ၊ ဆီများနှင့် ငံပြာရည်များအားလုံးအတွက် သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အခြောက်ခံပစ္စည်းများ၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်လုပ်အချိုရည်ကို ချက်ရန် အချဉ်ဖောက်ထားသော ဖန်ပုလင်းအဖြစ် အသုံးပြုရန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
350ml 500ml သစ်သီးဖျော်ရည် Ice Wine Milk Beverage 500ml Glass Juice Bottles
အခမဲ့နမူနာ 190ml ဗလာသေးငယ်သော ပါးစပ်အကြည် ကြယ်ပွင့်ဖန်ရည်ပုလင်းများ
520ml ကြည်လင်သော ဖန်နို့ပုလင်း ဖန်ရည်ပုလင်းများကို သတ္တုအဖုံးဖြင့် ပြန်သုံးပါ။
ပြန်သုံးနိုင်သော ပြင်သစ် 350ml 380ml 495ml စတုရန်းဖန်ခွက်ဖျော်ရည်ပုလင်းများ ထုပ်ပိုးခြင်း
ရည်ရွယ်ချက်များစွာ- ဖန်ရည်ပုလင်းများဦးထုပ်ပါသော အလွတ်ပြန်ဖြည့်နိုင်သော အဖျော်ယမကာပုလင်းများသည် အချိုရည်အားလုံးနီးပါးကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။လက်ဖက်ရည်၊ နို့၊ ရေ၊ အချိုရည်များ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ဖျော်ရည်များ၊ ဘီယာ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အသုပ်ဝတ်ခြင်း၊ kefir၊ kombucha၊ စိမ်ထားသောအချိုရည်များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။သင့်ဖျော်ရည်ဖျော်စက်မှ လန်းဆန်းသောအချိုရည်အချို့ကို ကျွေးရန် smoothie ကွန်တိန်နာအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ် နံ့သာမျိုးများ၊ အမှုန့်များ၊ ရောနှောခြင်း၊ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ သကြား၊ ဖြန်းခြင်းနှင့် လက်မှုပညာများကဲ့သို့သော သင်၏ခြောက်သွေ့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။
အရည်ဖျော်ရန် ပလပ်စတစ်ပုလင်းများ မရှိတော့ပါပလပ်စတစ်ပုလင်းများနှင့် ပလတ်စတစ်ဖျော်ရည်ခွက်များထက် ပြန်လည်သုံးနိုင်သော ရေဘူးကို ရှာသောအခါ ပိုကောင်းပါသည်။ပလတ်စတစ်ရေသန့်ဘူးတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုကို ရှောင်ပြီး ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ ဖန်ပုလင်းတွေကို ဝယ်ပါ။အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက် ပလပ်စတစ်အစားထိုး နို့ဗူးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းစေပါသည်။
Crack ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဖန်ရည်ပုလင်းများ-မင်းရဲ့ ခရီးဆောင် ဖန်ရေပုလင်း ဒါမှမဟုတ် ဖန်နို့ပုလင်းတွေကို ချိုးဖျက်တာထက် ပိုဆိုးတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် စျေးကွက်စံနှုန်းထက် ပိုထူတဲ့ မှန်တွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။တာရှည်ခံရေပြန်ဖြည့်နိုင်သော ဤပုလင်းများသည် ဖျော်ရည်အိုးအတွက် အခြားတစ်ခုခုကို သင်ဘာကြောင့်သုံးဖူးသည်ကို အံ့သြစေမည်ဖြစ်သည်။
ထူးခြားသော ဒီဇိုင်း-ပုလင်းတွင် အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ကျယ်ဝန်းသော အပေါက်ပါရှိပြီး ပုလင်းကို ဖြည့်ရန် နှင့် သန့်ရှင်းရန် လွယ်ကူစေသည်။ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်မားခြင်းသည် အတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသော အကြောင်းအရာများကို ကောင်းမွန်စွာ မြင်နိုင်စေသည်၊ ပုလင်းများ၏ စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်သည် သိုလှောင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့် နေရာလွတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
OEM ဝန်ဆောင်မှု-၎င်းတို့သည် သင့်အတွက် ရွေးချယ်ရန် အရွယ်အစားများစွာရှိသည်။စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အဖုံးများကိုပံ့ပိုးပါ။
355ml 418ml 502ml ခရီးသွားဖန်ခွက်ဖျော်ရည်ပုလင်းများ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောဖန်ရေအလွတ် ဖန်ဖျော်ရည်ပုလင်း
Flat Shaped 250ml 500ml 750ml Wine Bottle Glass Whisky Vodka Empty Liquor Glass Bottle အဖျော်ယမကာပုလင်း
အစုံသုံး-Gဝိုင်ဖျော်ရည်၊ အိမ်လုပ်အဖျော်ယမကာများ၊ အေးခဲလက်ဖက်ရည်၊ ဖျော်ရည်၊ စပျစ်သီးဝိုင်၊ Kefir၊ အပြင်အဆင်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော
အရည်အသွေးမြင့်မားသော:ထိပ်တန်းအရည်အသွေး၊ လေးလံသောဖန်သား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စတိုင်ကျသည်။
လှပသောအရောင်ဝိုင်၏လှပသောအရောင်သည် မီးကျောက်ဖန်ခွက်မှတဆင့်ပြသပြီး မည်သည့်ဝိုင်-အနီ၊ အဖြူ သို့မဟုတ် နှင်းဆီနှင့်မဆိုသာ အဆင်ပြေသည်။
လုံခြုံပြီး စိမ့်ဝင်မှု: အရည်အသွေးမြင့်ပြီး လေဝင်လေထွက်လွန်ကဲသော တံဆိပ်ကို အာမခံသည်၊ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိ၊
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုပ်ပိုးမှု-ထုပ်ပိုးထားသော ပုလင်းအလွတ်များတွင် တံဆိပ်တုံး/ဝက်အူအဖုံးများ၊ ကျုံ့ထားသော ဆေးတောင့်ထုပ်များ၊ ပုလင်းများကို ထူထဲသောအမြှုပ်များနှင့် ခိုင်ခံ့သောပုံးများဖြင့် လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးထားပါသည်။ပုလင်း နှင့် ဦးထုပ်များ အားလုံး မပျက်မစီး ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါမည်။
ဝက်အူသတ္တုအဖုံးပါသော 155ml 295ml 505ml Glass Beverage Bottle ဖန်ရည်ပုလင်းများ
1) အရည်အသွေးမြင့် ဖန်ပုလင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဖန်ရည်ပုလင်းများ၊ ကြီးမားသော အချင်းပုလင်း ပါးစပ်သည် လှပသောအသွင်အပြင်ဖြင့် ယူရလွယ်ကူသည်။
၃) ပရီမီယံ ဖန်အိုးများသည် သင့်အဖျော်ယမကာကို သိုလှောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘီယာ ဖန်ပုလင်း, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, Reed diffuser ပုလင်း, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး,